Gbasaa 2GB gabigara ókè OST Njikwa n'ime faịlụ PST pere mpe - Nzọụkwụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ
Home ngwaahịa DataNumen Exchange Recovery Gbasaa 2GB gabigara ókè OST Njikwa n'ime faịlụ PST pere mpe
iji DataNumen Exchange Recovery to Split gabigara ókè 2GB OST Njikwa n'ime faịlụ PST pere mpe
4.90 / 5 (site na 1,619 votes)
Mara: Ọ bụrụ n’inwere Outlook 2003 ma ọ bụ karịa ka arụnyere karịa, anyị na-akwado gị ka ị jiri usoro a iji weghachite ibu gị OST faịlụ kama. Ma ọ bụghị, biko jiri usoro dị na ntuziaka a.
Ọ bụrụ na gị OST Faịlụ Microsoft kere Outlook 2002 ma ọ bụ nke dị ala karịa nke ya, nha ya ruru ma ọ bụ karịa 2GB, ị ga-ezute ya kpuchie elu ya OST nsogbu faịlụ na enweghị ike ịrụ ọrụ OST faịlụ ọzọ. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ịnwere ike iji DataNumen Exchange Recovery iji kewaa oke OST faịlụ n'ime ọtụtụ obere PST faịlụ ndị na-erughị 2GB ma dakọtara na Outlook 2002 na ụdị ndị ala. Mgbe ahụ i nwere ike iji Outlook 2002 ma ọ bụ obere nsụgharị imeghe nkewa PST faịlụ n'otu n'otu ma nweta data ha n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Cheta na: Tupu ya ekewa ndị oversized OST faịlụ na DataNumen Exchange Recovery, biko mechie Microsoft Outlook na ngwa ọ bụla ọzọ nwere ike ịnweta ma ọ bụ gbanwee ya OST faịlụ.
gaa taabụ, wee họrọ nhọrọ ndị a:
ma tọọ oke oke na uru erughị 2GB. Akwadoro ka i jiri uru nke pere mpe nke 2GB mee ka PST gi ghara iru 2GB ozo n’oge na adighi anya, 1000MB. Biko mara na unit bụ MB.
Gaa na taabụ.
Họrọ oversized OST faịlụ a ga-kewaa:
Nwere ike itinye na oversized OST aha faịlụ ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ na-agagharị na họrọ OST faịlụ. I nwekwara ike pịa bọtịnụ ịchọta oversized OST faịlụ a ga-kewaa na mpaghara kọmputa.
Site na ndabara, mgbe DataNumen Exchange Recovery na-enyocha ma kewaa isi iyi buru ibu OST faịlụ n'ime ọtụtụ obere faịlụ PST, aha PST mbụ kewara aha xxxx_fixed.pst, nke abụọ bụ xxxx_fixed_1.pst, nke atọ bụ xxxx_fixed_2.pst, were gabazie, ebe xxxx bụ aha nke isi mmalite ahụ OST faịlụ. Dịka ọmụmaatụ, maka isi mmalite OST Isi mmalite faịlụost, na ndabara, mbụ gbawara n'etiti PST faịlụ ga-Source_fixed.pst, na nke abụọ ga-Source_fixed_1.pst, na nke atọ ga-Source_fixed_2.pst, wdg.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji aha ọzọ, biko pịa ma ọ bụ tọọ ya dịka:
Nwere ike itinye aha faịlụ PST mmepụta ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ iji chọgharịa ma họrọ aha faịlụ PST.
Ebe ọ bụ na naanị anyị nwere Outlook 2002 ma ọ bụ ụdị ndị arụnyere, anyị kwesịrị ịhazi usoro nke faịlụ PST na-emepụta na "Outlook 97-2002" na ngwakọta n'akụkụ mmepụta faịlụ dezie igbe. Ọ bụrụ na ịtọ usoro ahụ "Ekpebisiri ike", mgbe ahụ DataNumen Exchange Recovery ga - ewepụta faịlị PST na - arụ ọrụ dabara na Outlook awụnyere na kọmputa mpaghara.
pịa bọtịnụ, na DataNumen Exchange Recovery ga start na-enyocha iyi ahụ buru ibu OST faịlụ, na-agbake na ịnakọta data dị na ya, wee tinye ha n'ime faịlụ PST gbawara agbawa aha ya edoziri na Nzọụkwụ 5. Anyị ga-eji Source_fixed.pst dị ka ihe atụ.
Mgbe nha nke Source_fixed.pst rutere oke preset na Nzọụkwụ 2, DataNumen Exchange Recovery ga-emepụta faịlụ PST ọhụrụ nke akpọrọ Source_fixed_1.pst, ma gbalịa itinye data fọdụrụ n'ime faịlụ ahụ.
Mgbe faịlụ nke abụọ rutere ntọala atọ ọzọ, DataNumen Exchange Recovery ga-ekepụta faịlụ PST nke atọ akpọrọ Source_fixed_2.pst iji nweta data fọdụrụ, wdg.
N'ime usoro ahụ, ogwe ọganihu
ga-aga n’ihu dika iji gosipụta nkewa nkewa.
Mgbe usoro gbawara agbawa, ọ bụrụ na agbanwee data ọ bụla na faịlụ PST kewara nke ọma, ị ga-ahụ igbe ozi dị ka nke a:
Ugbu a, i nwere ike imeghe splitted PST files one by one with Microsoft Outlook 2002 or lower versions. You ga-achọta data niile nke izizi buru ibu OST a na-agbasa faịlụ n'etiti faịlụ PST ndị a.
Cheta na: Demdị ngosi ga-egosipụta igbe ozi na-esonụ iji gosipụta ọganiihu nkewa nkewa:
Mgbe ahụ ị pụrụ imeghe gbawara n'etiti PST faịlụ na Microsoft Outlook 2002 ma ọ bụ ala na nsụgharị. Agbanyeghị, maka ozi na mgbakwunye na faịlụ PST gbawara agbawa, a ga-eji ihe ngosi ndị a dochie ọdịnaya ha:
Iji nweta ihe dị n'ime, biko ịtụ ụdị zuru ezu.
Gbasaa 2GB gabigara ókè OST Njikwa n'ime faịlụ PST pere mpe